Questions प्रश्नहरू तपाईले जहिले पनि फार्मासिष्टलाई सोध्नु पर्छ - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी चेकआउट समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> कल्याण >> Questions प्रश्नहरू तपाईले सँधै आफ्नो फार्मासिष्टलाई सोध्नु पर्छ
Questions प्रश्नहरू तपाईले सँधै आफ्नो फार्मासिष्टलाई सोध्नु पर्छ
प्रिस्क्रिप्सन भर्ने बाहेक, फार्मासिष्टहरूसँग रोगहरूको उपचार गर्न र सर्तहरू प्रबन्ध गर्न औषधीहरूको प्रयोग गरी विस्तृत प्रशिक्षण हुन्छ। तपाईंको फार्मासिष्टसँग कुराकानी सुरु गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि सही औषधिहरू सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ - र हानिकारक साइड इफेक्टबाट बच्नुहोस्।
फार्मासिष्टलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न
यी questions प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस् कुराकानी शुरू गर्न अर्को पटक तपाईं प्रिस्क्रिप्सन उठाउँदा।
१. यो औषधि के हो?
जे होस् तपाईको चिकित्सकले तपाईलाई यो सल्लाहको उद्देश्य बताएको हुन सक्छ, फार्मासिष्टलाई सोध्नु राम्रो उपाय हो कि औषधि केको लागि प्रयोग गरीन्छ।
यो मूर्खतापूर्ण प्रश्न जस्तो देखिन सक्छ, तर यसले मलाई यो निर्धारण गर्न अनुमति दिँदछ कि यदि यो वास्तवमै तपाईंको लागि उत्तम औषधि हो भने, भने जेन वोल्फ , एक बोर्ड-प्रमाणित geriatric फार्मासिस्ट। डाक्टरहरूले कहिलेकाँही गलत औषधि पठाउँछन्। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंसँग ड्रगको लागि सर्त छैन, त्यसैले म तपाईंलाई यो नलिन सल्लाह दिन सक्छु।
खाना पछि तपाइँको ग्लुकोज स्तर के हुनुपर्छ?
यस प्रश्नले तपाईंलाई यस्तै प्रकारको औषधिहरू दोब्बर हुनबाट जोगिन सक्छ।
फार्मासिष्टहरूले बिरामीहरू धेरै नक्कल लिने देख्दछन्। कहिलेकाँही मानिस एकबाट सुरू हुन्छ र यो अर्कोसँग मिल्दोजुल्दो महसुस हुँदैन, र उनीहरूले अघिल्लोलाई लिन छोड्नु पर्छ, क्लतालिक फार्मासिस्ट नेटाली ग्रसले भने। शर्मन ओक्स अस्पताल ।
२. मैले यो औषधि कसरी लिने?
प्रत्येक औषधी फरक तरिकाले काम गर्दछ। तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन लिने उत्तम तरिकाको बारेमा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्।
केही औषधिहरू दिनको समयमा धेरै विशिष्ट हुन्छन् ती लिनुपर्दछ, ग्रोसले भने। उदाहरणको लागि, [केही] कोलेस्ट्रोल औषधीहरू रातमा लिनु अझ राम्रो हुन्छ, जबकि डायरेटिक्स बिहान लिनुपर्दछ किनकि त्यसले तपाईंलाई रातभर बाथरूममा जान सक्दछ।
फार्मासिष्टले तपाईंलाई पनि औषधि खानुपर्दछ कि भनेर जान्न सक्छ। केही औषधीहरूको लागि खानाले कति मात्रामा औषधी लिन्छ र यसले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ भनेर वोलफेले भने।
कस्ता साइड इफेक्टहरू मैले आशा गर्नुपर्दछ?
हरेक औषधि सम्भावित साइड इफेक्टको साथ आउँदछ। नयाँ औषधिमा आशा गर्न सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टको बारेमा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्, साथै गम्भीर प्रतिक्रियाहरू जुन तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
केही औषधिहरूले तपाईलाई निन्द्रा वा चक्कर आउँछन् र रक्सीले गर्ने जति नै ड्राइभ गर्ने तपाईंको क्षमतालाई बिगार्न सक्छ, ग्रसले भने। अरूले खतरनाक साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ, र यदि तपाईंले तिनीहरूलाई याद गर्नुभयो भने, तपाईं तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ।
I. यदि मैले एक डोज याद गरेन भने मैले के गर्नुपर्छ?
कोही पनि सिद्ध छैनन्, र त्यहाँ त्यस्तो दिन आउनेछ जब तपाईंको गोली तपाईंको दिमागमा चिप्लन्छ। तपाईंको फार्मासिष्टले तपाईंलाई औषधि लिन बिर्सनुभयो भने के गर्ने भनेर जान्न सक्छ।
तपाईं वा गोलीमा डबल अप गर्न चाहनुहुन्न। रगत पातलो जस्ता केही औषधी वास्तवमा हानिकारक हुन सक्छ यदि तपाईंले एकै समयमा दुई खुराक लिनुभयो भने, र कहिलेकाँही यसलाई राम्रो लाग्दैन भने यदि तपाईंले एक दिन यसलाई लिन बिर्सनुभयो भने, ग्रसले भने।
सम्बन्धित: Pres प्रिस्क्रिप्शन रिमाइन्डर अनुप्रयोग र उपकरणहरू
This. के यो औषधि अन्य औषधिहरू लिन सुरक्षित छ?
औषधि एक अर्कासँग कसरी कुराकानी गर्दछ भन्ने कुरा फार्मासिष्टले अरू केहि पनि राम्ररी जान्दछन्। धेरै औषधीहरू लिदै, भिटामिन , जडिबुटी, वा एकै साथ पूरकहरूले उनीहरूलाई प्रभावहीन बनाउन सक्छ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई हानी पनि गर्न सक्छ। केहि खाना औषधीमा हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छ।
बिभिन्न फार्मेसीमा कम्प्युटरहरू जडित छैन, त्यसैले फार्मासिष्टलाई सबै कुरा भन्नुहोस् जब तपाईले प्रिस्क्रिप्शन भर्नुहुन्छ तपाईले लिइरहनुभएको छ, वोल्फेले भने। भिटामिन र पूरकहरूको साथ पनि, औषधीको साथ अन्तर्क्रिया हुन सक्छ।
यदि तपाइँसँग औषधिको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, तपाइँ मात्र सक्नुहुन्छ तर तपाइँले पनि हुनु पर्छ लिनु अघि फार्मासिष्टबाट सल्लाह लिनुहोस्। फार्मेसीमा भेटेर वा कल गरेर फार्मासिष्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो औषधि भर्नुहुन्छ। केही फार्मेसीहरू २ hours घण्टा खुला हुन्छन्, त्यसैले दिनको कुनै पनि घडी वा रातमा कल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
Viibryd vs Lexapro: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Claritin डी 12 घण्टा को साइड इफेक्ट
स्याउ साइडर सिरका र उच्च रक्तचाप को लागी मह
ibuprofen को एक सामान्य खुराक के हो
के दुखाइ निवारक तपाइँ meloxicam संग लिन सक्नुहुन्छ
गम्भीर कब्जियत को लागी सबै भन्दा राम्रो घरेलु उपचार के हो